Talohan'ny nahatongavan'ny eoropeana tao, ny amorontsiraka Pasifika dia nopetrahan'ny foko teratany maromaro manana kolontsaina samihafa, miaina amin'ny fanjonoana ny trozona sy ny salmôna (saumon). Fantatra amin'ny lakany sy ny totem-ny izy ireo ankehitriny.
Ny kapteny espaniona don Bruno de Heceta dia nahita ilay faritany tamin'ny 1775 ary nilaza fa an' Espaina daholo ny tany rehetra hitany hatrany amin'ny zanatany Rosy any avaratra (Alaska). Tamin'ny 1778, ny mpizahantany James Cook dia nandeha hatreo amin'ny Tanjona Flattery, eo am-pidiran'ny detroit-n'ny Juan de Fuca, fa io detroit io dia tamin'ny 1789 vao nodihinana akaiky, dia tao aoriana novangian'ny espaniola sy ny britanika George Vancouver, tamin'ny 1792.
Araka ny fifaneken'i Nootka tamin'ny 1790, ny faritany any Avaratra andrefana dia misokatra ho an'ny trappeur sy ny mpizahantany britanika sy amerikana. Ny kapteny Robert Gray, nanome ny anarany an'ny kaontian'i Grays Harbour, dia nahitan'ny vavaranon'ny Columbia, ary nomeny an'ilay renirano ny anaran'ny sambony, ny Columbia. Ny mpanjanatany voalohany tonga tao amin'ny faritan'i Washington dia i Lewis sy Clark, nahita ilay faritany tamin'ny alàlan'ny tongotra.
((en)) Site officiel de l'État de Washington
((en)) Site officiel touristique de l'État de Washington Archived Desambra 13, 2006 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington&oldid=1014126"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 07:03 ity pejy ity.